Translate Myanmar (Burmese) to Polish | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Polish, Myanmar (Burmese) to Polish translations, Myanmar (Burmese) to Polish Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Cześć, jak się masz
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Czy jest ktoś?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Bardzo cię kocham
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Ile to kosztuje hamburger?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Czy możesz zadzwonić do mnie taksówką?
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို jestem zainteresowany
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Mój lot się opóźniał
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Jestem tutaj w celach biznesowych
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Cześć, mam na imię
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Przepraszam, ale jestem żonaty
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Chciałbym Cię zapytać
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Czy możesz zabrać mnie na lotnisko?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Jak teraz masz ochotę?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Gdzie jest najbliższa stacja policji?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Czy mogę pożyczyć ładowarkę telefonu?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Możesz mi pomóc?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Zamów mi drinka, proszę?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Ile to kosztuje?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Jestem uczulony na gluten
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Proszę wezwać lekarza
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Czy jest lekarz?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Czy mogę zadzwonić?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Zadzwoń do mnie, twój szef proszę.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် To miejsce jest bardzo miłe
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Zabierz mnie do hotelu
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Jaki jest mój numer pokoju?